Global Voices teny Malagasy » Inona No Iraisan’ny Hetsi-panoheran’ny Mpamily Fiarakaretsaka Ao Lisbonne Sy Jakartà ? Uber! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2015 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Manuel Ribeiro Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Andrefana, Indonezia, Paortiogaly, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tsidika
Fiarakaretsaka ao Lisbon, Portiogaly. Sary : Manuel Correia  (CC BY-SA 3.0)
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity koa i Juliana Harsianti .
Amin'ny maha-sehatra azy, nanome fomba hafa ho an'ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka any amin'ny firenena maro ny Uber, fa nahazo ihany koa ny hatezeran'ireo mpamily fiarakaretsaka sy mpandraharaha hafa amin'ny resaka fitateram-bahoaka izay mahatsapa ho tandindonin-doza noho ny fisiany. Ny sasany amin'ireo aza, izay mihevitra fa manohintohina ny toekarena anatiny ny Uber, dia nikarakara mihitsy hetsi-panoherana nanerana ny tany. Tsy ela akory izay, natomboka tao Potiogaly sy Indonezia ny hetsika fanoherana ny Uber.
Hetsi-panoherana taminà tanàna 3 tao Portiogaly
Nifamory hanao hetsika faobe hanoherana ny Uber ireo mpamily avy aminà tanàna lehibe telo tao Portiogaly—Faro, Lisbon, and Porto. An'aliny ireo mpamily fiarakaretsaka no nidina an'arabe haneho ny ahiahin-dry zareo momba ny asan'ilay orinasa.
Mpamily manodidina ny 3.500 nanao hetsi-panoherana ny Uber tao Lisbonne, Porto, ary Faro
Ny tena alahelon'ireo mpamily dia hoe tsy manana lisansy hanao fandraharahana hitatitra olona ao Portiogaly ny Uber, kanefa dia manohy manome tolotra ho an'ny daholobe. Marobe ireo mpamily no miteny fa nahatsiaro ho voafitaka rehefa very mpandeha noho ny ataon'ny Uber. Vokatr'izay, nanapaka hevitra hanao hetsi-panoherana izy ireo.
Noho ny antony tsy mitombina velively anefa dia nifantohan'ny sain'ireo media iraisampirenena ilay hetsi-panoherana. Lasa nifantohana ilay vaovao momba ny fihetsiketsehana goavana noho ilay tranganà herisetra nanasongadina mpamily iray sy mpakasary fanao an-gazety izay tafalatsaka tao anivon'ny fifanjevoana ary niafara tany amin'ny toeram-pitsaboana taorian'ny daroka nataon'ireo mpamily nentin-katezerana. Nilaza ho tohina mafy tamin'ilay tranga nanjo ilay mpanao gazety ireo mpikarakara ilay hetsi-panoheran'ny mpamily fiarakaretsaka.
Ny niafaràny, lasa toy ny vao mainka nampahalaza ny Uber kokoa aza ireo hetsi-panoherana: lasa ny fampiasa trohana betsaka indrindra ao amin'ny firenena ny fampiasa azy amin'ny fiteny Portiogey.
Ity no vokatry ny hetsi-panoherana (ny fampiasa Uber no be mpitroka indrindra ao anatin'ny fandaharana Portiogey androany)
Nahatonga ireo Portiogey sasany naniry hahafantatra misimisy kokoa momba ny tolotra Uber ihany koa ilay hetsika fanoherana, ary maro no nalaim-panahy hanandrana azy:
Noheveriko fa nifàrana noho ny antony araka ny lalàna ny @Uber_Lisboa . Ny zavatra mifanohitra amin'izany no nanairan'ireo mpamily fiarakaretsaka ahy, ankehitriny tena te-hanandrana azy ity aho!
Talohan'io hetsika goavana io, noraràna tsy handraharaha tao Portiogaly ny Uber araka ny didin'ny  fitsarana iray ao Lisbonne. Kanefa, notohizan'ilay orinasa ihany ny fandraharahàny, araka ny lazain'ny tranonkalany .
Tamin'ny fanehoankevitra noho ilay didin'ny fitsarana handraràna ny tolotra, nisy vondron'olon-tsotra nanomboka fanangonantsonia tety anaty aterineto  nitakiana ny hanomezana alàlana ny Uber ho afaka mandraharaha ao amin'ny firenena.
Andro telo talohan'ilay hetsiky ny mpamily fiarakaretsaka, nangatahan'ny  governemanta Portiogey ny Fiombonambe Eoropeana sy ny Parlermanta Eoropeana mba hanampy amin'ny fifehezana ilay orinasa. Ny tena olana fototra ho an'ireo manampahefana ao Portiogaly dia ny hametraka hoe sehatra fotsiny fanolorana tolotra amin'ny alàlan'ny aterineto ve sa orinasa hanao fitateram-bahoaka ny Uber.
Nandritra izany fotoana izany, ireo mpizahatany no tena nizaka ny vokany. Lasa mampidi-doza ny fakàna ny tolotra Uber ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Lisbonne satria misafo ny faritra ireo Portiogey mpamily fiarakaretsaka mba handroahana ireo fiaran'ny Uber.
Ny lahatsary  eto ambany dia mampiseho vondrona fiarakaretsaka manakana fiara iray mampiasa Uber tsy hitatitra mpizahatany:
Hetsi-panoherana ny Uber tao Indonezia
Fiarakaretsaka ao Jakarta. Sary : Celica21gtfour  (CC BY-SA 3.0)
Vao haingana koa ireo tanàna sasany ao Indonezia no nahitàna hetsi-panoherana ny Uber. Toy ny tany Portiogaly, nahatsapa ireo mpamily fiarakaretsaka tao Bandung sy Jakarta fa manimba ny fiveloman-dry zareo ny Uber.
Saingy voaporofo fa malaza kokoa eny anivon'ny vahoaka ny Uber, ny olona izay nahamarika fa matetika no maka saran-dàlana ambony be ireo fiarakaretsaka ara-dalàna. “Manana safidy bebe kokoa ankehitriny ny mpanjifa ary mahazo tombony kokoa,” hoy i Ficky, iray amin'ireo mpandeha Uber ao Indonezia.
Ny sarintany Uber ao Jakarta. Pikantsary avy amin'ny fampiasa Uber. 
Ankoatra izay, toa sahala amin'ny tian'ireo mpandeha kokoa fa mazàna lehibe sy ahazoana aina kokoa ny fiara Uber.
Volana vitsy taorian'ny nanombohan'ny Uber tao Indonezia, nametraka fitoriana  teny amin'ny polisy ny sasany tamin'ireo orinasa mitantana fiarakaretsaka ao Jakarta sy Bandung. Nolazain'ireo mpitory fa ambany ny saran-dalana Uber satria tsy mandoa ny hetra mifanaraka amin'ny tokony haloa aminì'ny fanjakana ilay orinasa.
Nisy orinasa 9 mitantana fiarakaretsaka no nanatevina laharana tamin'ilay hetsi-panoherana sy nameno ilay taratasy fitoriana tany amin'ny polisy. Tao Bandung sy Jakarta, namoaka didy ny goveremanta ao an-toerana fa hoe miasa tsy ara-dalàna amin'ny sehatry ny fitateram-bahoaka ny Uber. Avy eo, nisy fiaraha-miasa napetraka niarahan'ireo governemanta tao an-toerana, ny polisin'ny distrika ary ny ministeran'ny fitaterana mba hampitsaharana ny fandraharahan'ny Uber tsy hanao tolotra fiarakaretsaka. Hoy i  Ipung Purnomo avy amin'ny Polisy ao Jakarta :
Mba hiarovana ny fahaleman'ny olona, nanapaka hevitra hanakana ny Uber any amin'ny tanàna sasantsasany izahay. Ity fanapahana ity dia niainga avy amin'ny didy mandràra ireo fiara tsotra tsy ho azo ampiasaina ho fitaovana fitateram-bahoaka.
Asehon'ireo hetsi-panoherana tao Portiogaly sy Indonezia fa any amin'ny firenena maro, ireo sehatra anaty aterineto toy ny Uber, na dia manome tolotra mora sy tsy manahirana aza, dia misedra ihany koa ny tsy hafalian'ireo mpamily fiarakaretsaka any an-toerana sy ny fanamby ateraky ny fitsipika. Ny fameperana ny tolotra toy ny Uber dia mety hiantraika mivantana amin'ireo fandraharahàna ao an-toerana sy amin'ireo olon-tsotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/21/74796/
 fanangonantsonia tety anaty aterineto: http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT76967
 Ny sarintany Uber ao Jakarta. Pikantsary avy amin'ny fampiasa Uber.: https://www.uber.com/cities/jakarta
 Hoy i: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/12/nuju0n361-satuan-pemburu-taksi-uber-dibentuk